Iingwamza Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ngaphakathi Me14 5et, Maidstone, Kent
Iingwamza ngaphakathi Maidstone
Ipapashwe ngu Ben Siggins
I-Kent yidolophu esemZantsi Mpuma yeNgilani kunye nelinye lamazwe alapha ekhaya. Imida i-Greater London ukuya emantla-ntshona, e-Surrey ukuya entshona nase-East Sussex ukuya emazantsi-entshona. Le dolophu ikwabelana ngemida kunye ne-Essex ecaleni kwamachweba oMfula iThames (edityaniswe nomhlaba ngesantya esiphezulu 1 kunye ne-Dartford Crossing), kunye nesebe lase-France lePas-de-Calais ngeThaneli yeThaneli. Idolophu yesithili yi-Maidstone. IKent yayiphakathi kwemimandla yokuqala yaseBritani eyahlulwa yaze yahlalwa ngama-Anglo-Saxons. I-Canterbury Cathedral e-Kent ibisisihlalo se-Archbishop yaseCanterbury, inkokeli yeCawa yase-England, ukusuka kuHlaziyo. Ngaphambi koko yayakhiwe ngamaKatolika, aqala emva ekuguqulweni kweNgilani kubuKatolika nguSanta Augustine owaqala ngenkulungwane ye-6. Phambi kohlaziyo lwesiNgesi ikati yayiyinxalenye yoluntu lwaseBenedictine olwaziwa njengeChristmas Church, eCanterbury, kunye nokuba sisihlalo sika-Archbbishop wamaKatolika waseCanterbury. Ubhishophu wokugqibela wamaKatolika waseCanterbury nguReginald Pole. I-Rochester Cathedral ikwakhona eKent, eMedway. Yinkonzo yesibini endala eNgilani, neCanterbury Cathedral yeyona indala. Phakathi kweLondon kunye ne-Strait ye-Dover, eyahlulahlula i-Europe, i-Kent ibone zombini i-diplogology kunye nokungqubana, ukusukela kwiintetho zeLeeds Castle ngo-1978 kunye no-2004 ukuya kwiMfazwe yaseBritane kwiMfazwe yesibini yeHlabathi. I-England yaxhomekeka kwizibuko le-County ukubonelela ngeenqanawa zokulwa ngembali yayo enkulu; Amachweba e-Cinque ngenkulungwane ye-12 neye-14 kunye neChatham Dockyard ngenkulungwane ye-16 ukuya kowama-20 kwakubaluleke kakhulu. IFransi inokubonwa ngokucacileyo kwimozulu entle evela kwi-Folkestone kunye ne-White Cliffs yeDover. Iintaba ngohlobo lweeNtla eziseMazantsi kunye ne-Greensand Ridge ubude bubude be-kata kunye nothotho lweentlambo phakathi kunye nasezantsi uninzi lweenqanawa ezingama-26 zedolophu. Ngenxa yobuninzi bayo bokukhula kweziqhamo kunye nezitiya zehip hop, iKent yaziwa ngokuba 'yiGadi yaseNgilani'.Kent yezoqoqosho yahluke kakhulu; Haulage, Logistics, kunye nokhenketho ngamashishini amakhulu. Kumashishini asemantla ntshona e-Kent kubandakanya ukukhutshwa kwezinto zokwakha ezihlanganisiweyo, ukushicilela kunye nophando lwezenzululwazi. Imigodi yamalahle ikwadlale indima yayo kwilifa lemizi-mveliso laseKent. Iindawo ezinkulu zaseKent zingaphakathi kwebhanti yabahambi baseLondon kunye nokunxibelelana okuqinileyo kwezothutho kwikomkhulu kunye nelizwekazi elikufuphi lenze iKent ibe yirhafu ephezulu yengeniso. Iipesenti ezingamashumi amabini anesibhozo zepalamente zenza inxenye yeeNdawo eziBalaseleyo zeNdalo ngobuGcisa: iNyakatho namaZantsi.